Soo dejisan SmartSHOW 3D 15 – Vessoft
WindowsSawireynta iyo qaabeyntaTifatiraha sawiradaSmartSHOW 3D
Bogga rasmiga ah: SmartSHOW 3D
SmartSHOW 3D – software si loo abuuro slideshow oo ku saabsan heer xirfadeed. Barnaamijka wuxuu ku yimaadaa qalab ballaaran oo loo adeegsado abuurista sawirrada muuqaalka leh ee muusikada, muusikada, codka, koobiyada qoraalka ah iyo rijiyada 3D. SmartSHOW 3D wuxuu ku siinayaa fiilooyin kala duwan iyo saameyn ku-meel-gaar ah oo u dhexeeya sawirada bog-kasta oo la soo xushay ama si aan kala-sooc lahayn loogu qaybiyo hal-button. Barnaamijkani wuxuu abuuri karaa sawirrada muuqaalka leh oo leh layers badan oo walxo kasta oo ka mid ah sawir qaadaha sawirku awoodo inuu u guuro kuna beddelo saddexda cabbir. SmartSHOW 3D waxay kuu oggolaaneysaa inaad ku beddesho cajaladaha soo duubista qaabab video ah oo kala duwan, muujiyaan natiijooyinka shaashadda ballaaran oo diiwaan galiya mashaariicda la abuuray DVD-ga. SmartSHOW 3D sidoo kale waxay isticmaashaa tiro fara badan oo looyaqaano si dhakhso ah loo abuuro sawir fudud.
Kala-beddelidda iyo saamaynta wareegga ah
Ku darista codka
Qaar badan oo ka mid ah sheybaarada
Isku-beddelista muuqaalka sawir-qaadista
Soo dejisan SmartSHOW 3D
Faallo ku saabsan SmartSHOW 3D
SmartSHOW 3D Xirfadaha la xiriira
Jpegcrop – softiweer leh qalab ay ku shaqeeyaan qalab caadi ah oo ay ku shaqeeyaan sawirrada qaab JPEG ah oo aan halista lumin tayada asalka ah.
editor The graphic waayo, reer binu da’da xannaanada la set badan oo ah saamaynta iyo qalab. software The weheliyo tallaabo kasta by saamaynta dhawaaqa funny.